दिल्लीले ओली र प्रचण्डलाई अलग्याउन खोजिरहेको छः मोहनबिक्रम सिंह - अन्तर्वार्ता - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
पत्नी दुर्गा पौडेलका साथ मोहनबिक्रम सिंह
हतपती अरु नेताका घर नजाने पुराना कम्युनिष्ट नेता महोनबिक्रम सिंह केही दिनअघि आकस्मिक रुपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खुमलटार निवास पुगे। एमाले र माओवादीसँग तालमेल गरी गृहजिल्ला प्युठानबाट आफ्नै पत्नी दुर्गा पौडेललाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा जिताउन सफल भएका सिंह राष्ट्रियसभामा पनि भागबण्डा खोज्न दाहालकहाँ पुगेको धेरैले ठाने। तर सिंह भने वामगठबन्धन भत्काउने खेल भइरहेको र त्यसलाई जोगाउने प्रयास अन्तर्गत दाहाललाई भेटेको बताउँछन्। वामगठबन्धन निर्माण र त्यसलाई टिकाउन भित्रिया भूमिका खेलिरहेका भनिएका नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका पुराना नेता, मसालका महामन्त्री सिंहले सरकार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको दोष पनि सबै दिल्लीको टाउकोमा हालिदिए। सिंहसँग काठमाडौंमा नेपालखबरका आकाश क्षेत्रीको सहयोगमा जेवी पुन मगरले गरेको लामो वार्ताको अडियोसहितको सम्पादित अंशः
नेताका घर बिरलै धाउने तपाईं केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न खुमल्टार जानुभयो, विशेष केही थियो?
हामीले देशको राजनीतिक परिस्थितिबारे कुराकानी गर्यौं। अहिले देशी विदेशी शक्ति वामगठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्रमा लागिरहेका छन्। वामगठबन्धनले निर्वाचनमा ल्याएको राम्रो परिणामबाट अत्तालिएकाहरुले गठबन्धन फुटाएर आफ्नो अनुकूल सत्ता लिन प्रयत्न गरिरहेका छन्। हामीले चुनाव त जित्यौं तर त्यसयता शानदार जनादेश पाएको वामगठबन्धनलाई भत्काउन खोजिँदैछ। शेर बहादुर देउवा खुल्लमखुल्ला बोलिरहेका छन्– ‘एमालेको नेतृत्वमा या एमाले सम्मिलित सरकार बन्छ भन्ने नै केही ठेगान छैन।’ यो भनेको एमालेलाई अलग गरेर पनि सरकार बन्न सक्छ भन्न खोजिएको हो। त्यो त प्रचण्डलाई देउवाले आफुसँग मिलाए भने मात्र सम्भव छ। ओली र प्रचण्डलाई अलग्याउन खोजिँदैछ। यसरी अहिले वामगठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भैरहेको छ। गठबन्धन तोडेर राजावादी, मधेसवादी र भारतपक्षधरको सरकार बनाउन खोजिँदैछ।
चुनावमा नेपाली कांग्रेस वा वामगठबन्धनले जित्ने भन्दा ठूलो प्रश्न राष्ट्रिय मुद्दाको थियो। संविधान संशोधनको दोश्रो विधेयकमा संसदमा लामो समय विवाद चलेको थियो। नागरिकता सम्बन्धी नीतिलाई अझै खुकुलो पार्न खोजिँदैथियो। गाउँपालिका र नगारपालिकालाई राष्ट्रिय सभाको चुनावमा मतदान गर्न दिइएको संवैधानिक अधिकार कटौती गर्न खोजिँदैथियो। संविधानको धारा २७४ खारेज गर्न बल गरिएको थियो। जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने लविङ त पहिल्यैदेखि भइरहेको थियो। तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन प्रयास गरिँदैथियो। तर यो तत्व संसदमा नराम्ररी पराजित भयो। यसलाई हामीले नजिकदेखि अध्ययन गरिरहेका थियौं।
त्यसैले वामगठबन्धन बनाएर यो तत्वलाई परास्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्वाचनमा एमाले र माओवादीलाई सहयोग गर्यौं। वामगठबन्धनले भारी मतले निर्वाचन जितेपछि यो तत्व अहिले गठबन्धन फुटाउन लागिरहेको छ। त्यसैले मैले प्रचण्डजीलाई भेटेर भनें– ‘तपाईंले जसरी एक भएर जुनाव जित्नुभयो यो खेर नजाओस्। देश फेरि प्रतिगमनतिर र राष्ट्रघाततिर नजाओस्। तपाईंले जसरीपनि यो एकतालाई कायम गर्न कोशिस गर्नुपर्छ।’
धारा २७४ को खारेजीले देश कसरी प्रतिगमनमा जान्छ?
संविधानले व्यवस्था गरेको यो धाराले ‘कुनै सीमा सम्बन्धि विषयमा केही हेरफेर गर्नुपर्यो भने बहुमत प्रदेशहरुको सहमति चाहिन्छ’ भन्छ। त्यसैले प्रदेशसभा नभएको मौकामा संसदबाटै सीमा सम्बन्धि निर्णय पारित गर्न खोजिँदैथियो। अदालतले हस्तक्षेप गरेपछि बाधक देखिएको धारा २७४ खारेज गर्न खोजिएको थियो। हामीले त्यसको विरोध गर्यौं। यदि यो खारेज गरिएको भए यसले पहाडबाट तराईलार्इ अलग्याउने बाटो खुल्थ्यो। त्यसपछि तिनले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरी तराईलाई नेपालबाट अलग पार्न सफल हुन्थे। त्यति गरिसकेपछि उनीहरुले तराईलाई भारतमा लगेर गाभिदिन्थे। यस्ता खतरनाक कुराहरु भैरहेका थिए। त्यसैले निर्वाचनमा हामीले नेपाली कांग्रेस र वामगठबन्धनबीच भन्दापनि राजनीतिक मुद्दाहरूमा प्रतिष्पर्धा भइरहेको देख्यौं।
कांग्रेसले राजावादी र मधेसवादीहरुसँग गठबन्धन बनाएर यी मुद्दा बोकेर आएको र त्यो गठबन्धनको हार भएकाले हामीले वामगठबन्धनलाई सकारात्मक मानेका हौं। निर्वाचनका बेला बिभिन्न गठबन्धन निर्माण गरिएपनि वाम पक्षधरको गठबन्धनले निर्वाचन जितेपछि भारतको हार र नेपालको जित भएको छ। त्यसैकारण हामीले यसलाई स्वागत र समर्थन गरेका छौं।
तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन खोजिँदैछ भन्नुहुन्छ, कसले र किन यस्तो गर्दैछ?
वामगठबन्धनलाई फुटाउन लागिपरेकोे विदेशी शक्ति भनेको मुख्यतः भारत नै हो। उसले नेपाल भित्रको शक्ति बिना यसो गर्न हिम्मत गर्ने थिएन, त्यसैले यो गठबन्धनलाई फुटाउन देशभित्रका शक्ति पनि लागेका छन्। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न लोभ देखाउनु त्यसैको उदाहरण हो। अंग्रेजले छाडेर जानासाथ नेपाललाई कमजोर बनाएर आफ्नोमा गाभ्ने योजना बमोजिम काम गर्दै आइरहेको छ भारत। त्यो नीति अनुरुप उसले राज्यसंयन्त्रमा पकड जमाउने र बिस्तारै तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने स्वार्थ बमोजिम अघि बढिरहेको छ।
त्यतिबेला सरदारभाई पटेलले नेपाललाई पनि हैदरावादलाई झैं भारतमा गाभ्नुपर्छ भनेर खुल्लमखुल्ला बोलेका थिए। भारत अहिलेपनि पटेलको त्यो विचारबाट पछाडि हटेको छैन। तर चुनावमा वामगठबन्धनको शानदार विजयले भारतको त्यो कदममाथि ब्रेक लागेको छ, त्यसैले वामगठबन्धन टुटाउन लागिपरेको छ। यो खतरनाक छ। त्यसैले हाम्रो चिन्ता कांग्रेस या माओवादीको सरकार बन्छ भन्ने भन्दापनि देश फेरि प्रतिगमनमा जान्छ, राष्ट्रघाततिर जाने खतरा छ भन्ने हो। त्यसैले मैले जोड दिएर प्रचण्डजीलाई यो तथ्य स्मरण गराएको हुँ। हाम्रो जोड चुनावमा हार भएको गठबन्धनको सरकार होइन, वा गठबन्धनको सरकार बनोस् भन्ने हो। प्रचण्डले लोभमा परेर वामगठबन्धन छाडे भने देशका लागि त्यो विश्वासघात हुनेछ र भारतको हस्तक्षेपको स्वागत हुनेछ।
भारत गठबन्धन तोड्न लागेको खुलेरै आरोप लगाउनु भयो, वामगठबन्धन फुटाउँदा उसलाई के फाइदा छ र?
धेरै फाइदा छन्। उनीहरुको मुख्य जोड एमाले र माओवादीलाई फुटाउनुमा छ। भारतले गठबन्धन फुटाउन सक्यो, प्रचण्डलाई उता लैजान सक्यो र बहुमत बनाउन सक्यो भने संविधान संशोधन विधेयक नै पारित गराउने छ। केपी ओलीका पालामा नेपालले चीनसँग पारबहन, रेलवे, पेट्रोलिय र उत्तरका नाकाहरु खोल्दै जाने लगायतका धेरै सम्झौताहरु गरेको छ, जुन भारतका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। ती सम्झौता असफल बनाउन र कटौती गर्नपनि भारतलाई पहिला वामगठबन्धन फुटाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले भारतलाई प्रचण्डभन्दा ओली समस्या भएका छन्। त्यसैले ओलीलाई कसरी एक्ल्याउने भनेर लगातार लागिरहेको छ।
नेपाली राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपको मुख्य कारण भनेको नेपालमा एकाधिकार कायम गर्ने नै हो, जसमा भारत अहिलेसम्म सफल भएको छैन। त्यो नगरिकन उसलाई नेपालबाट तराई अलग गराउने आफ्नो रणनीतिक योजना सफल बनाउन सम्भव भैरहेको छैन।
आफ्नै आन्तरिक झमेलामा फसेको भारतले नेपालको तराईमा अल्झिएर बस्ला र?
म तपाईंलाई केही पुराना उदारहण दिन चाहन्छु। कुनै बेला हाम्रो पार्टीमा भारतबाट आएका रघुनाथ राय नामका एकजना साथी थिए। उनले ‘म भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य हुँ र अन्तर्राष्ट्रियवादी हुँ’ भन्दै हामीसँग काम गर्न खोजे। केही समय हाम्रो पार्टीमा काम गरेपछि थाहा भयो, उनी भारत सरकारको गुप्तचरका रुपमा हाम्रो पार्टीमा छिरेर नेपालमा काम गरिरहेका रहेछन्। त्यो कुरा थाहा पाएपछि हाम्रो पार्टीले उनलाई कारबाही गरी पार्टीबाट निकाल्यो। केही समयपछि रायले मधेश कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरे। नौतनवामा कार्यालय खोलेर संगठन चलाइरहेका उनलाई नेपाली गुप्तचरले ललाई फकाई नेपाल छिराएर हत्या गरेका थिए। असाध्यै रक्सी पिउनुपर्ने रायले मलाई ‘भारतीय सरकारले नेपालको तराई भारतमा मिसाउने रणनीति बमोजिम नै म जस्ता गुप्तचर नेपालमा पठाएको र त्यहि बमोजिम काम गरिरहेको’ भनिरहन्थे। भारतले नेपाली नेताहरुमाथि लगानी गरिरहेको बताउँथे। भद्रकाली मिश्रहरु पनि भारतको त्यही स्वार्थमा काम गरिरहेको उनले सुनाएका थिए। तिनै रायलाई हाम्रा मधेसी दलहरु अहिले पनि शहिद मान्छन्।
हामी एकपटक राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा बनारस गएका थियौं। मैले नाम बिर्सिएँ, तराईबाट त्यो कार्यक्रममा सहभागी एकजनाले घोषणापत्र देखाएका थिए। अहिलेका सीके राउत जस्तै तराई केन्द्रित ती नेताले ‘नेपालबाट अलग गराएर तराई बेग्लै राष्ट्र बनाउनु पर्छ’ भन्दै राष्ट्रसंघलाई घोषणापत्र दिएका थिए। भारतले तराईलाई नेपालबाट अलग गर्न योजनावद्ध तरिकाले काम गरिरहेका धेरै उदाहरण छन्। यो सिलसिला चलिरहेको छ। त्यहि रणनीति अनुरुप भारतले योजनाबद्ध रुपमा मधेसी दलहरु तयार पारेको हो।
मधेसी दलहरु भारतको इशारामा चलेका छन् भनेर यत्तिकै आरोप लगाउन मिल्छ?
निश्चित रुपमा उनीहरु भारतको स्वार्थमा काम गरिरहेका छन्। यस्ता मान्छे मुठ्ठीभर छन्। हामीले मधेशका जनता भारतको इसारामा चल्छन् भनेका छैनौं। मधेशमा बहुसंख्यक जनता देशभक्त छन् भन्ने कुरालाई तिलाठीको घटनाले पुष्टी गरिदिएको छ। सिमारक्षक देव नारायण यादव जेलमा पनि परे। तर भारतले मधेशमा केही यस्ता मानिसहरु घुसाएको छ जो सधैं भारतका लागि काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसमा मधेसी नेताहरु पनि पर्छन्।
कांग्रेसले वामगठबन्धन फुटाउन लागेको भन्नुभएको छ, त्यो किन होला?
कांग्रेस सुरुदेखि नै भारतीय स्वार्थमा काम गर्दै अइरहेको दल हो। सम्पूर्ण काँग्रेस भारतपरस्त छ भन्दैनौं। जस्तै विपी भारतसँग नमिलेर राजासँग मेलमिलाप गर्न स्वदेश फर्किएका थिए। बीचमा कांग्रेसका केही नेताहरु राष्ट्रियताका पक्षमा उभिए। सुशील कोइराला र रामवरण यादव राष्ट्रियताको पक्षमा उभिए। त्यसैले राष्ट्रपतिमा उठ्दा भारतले रामवरणलाई हराउन खोजेको थियो। तर कांग्रेसमा केही यस्ता नेताहरु छन् जो पद र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई बेच्न पनि तयार हुन्छन्।
त्यस्ता नेता त वाम खेमातिर पनि होलान नि। कुनैबेला तपाईंले नै माओवादीलाई पनि भारतपरस्त भन्नुभएको थियो ...
माओवादीहरूले जे कुरालाई जनयुद्ध भने त्यसलाई हामीले जनयुद्ध मानेनौं, उग्रवामपन्थी भड्काव भन्यौं। उनीहरुले लिएको कदमका आधारमा हामीले उनीहरुलाई राजापरस्त र भारतपरस्त पनि भन्यौं। कार्यगत एकता गर्दा हामी भूतकाल पनि हेर्दैनौं र भविश्य पनि हेर्दैनौं। रणनीतिक रुपमा हेर्छौं। माओवादी राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्धको संघर्षमा उत्रेपछि हामीले समर्थन गर्यौं। तात्कालिक रुपमा मिल्न सकिने अवस्थामा हामी कुनैबेला गिरिजाबाबुसँग पनि मिलेका थियौं। राजतन्त्र विरुद्धको संघर्षमा कार्यगत एकता गरेका हौं। महाकाली सन्धिमा केपी ओलीसँग हाम्रो मतभेद थियो र खुलेर उनको विरोध गरेका हौं। जब उनी भारतको हस्तक्षेप विरुद्ध उत्रिए, हामीले पुराना कुरा बिर्सेर उनलाई समर्थन गर्यौं।
त्यसैले हामी देशका लागि तत्कालिन नीति जसले राम्रो ल्याउँछ त्यसैसँग सहकार्य गर्छौं। जनयुद्धपछि प्रचण्डको सरकारलाई हामीले विरोध गरेका थियौं। वामगठबन्धनमा आएपछि हामीले उनलाई स्वागत गर्यौं। काँग्रेससँग मिल्न जाँदा विरोध गर्यौं। फेरि वामसँग मिल्दा स्वागत गर्यौं। देशको राजनीतिक परिस्थिति अनुरुप हाम्रो तात्कालिक नीति पनि परिवर्तन भइरहन्छ।
महाकाली सन्धिमा केपी ओलीको भूमिकालाई अहिले के भन्नुहुन्छ?
केपी ओलीको भारतपरस्त त्यो भूमिकालाई हामी अहिलेपनि विरोध गर्छौं। संविधानसभामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दर्ता गराएको पहिलो संशोधन विधेयक पछि ओलीले पास गराएका हुन्। भारतपरस्त त्यस विधेयकमा भूगोललाई गौण र जनसंख्यालाई प्रमुख बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। हामीले त्यसविरुद्ध मतदान नै गर्यौं। त्यसमा अहिले पनि हामी ओलीको विरोध गर्छौं।
भारतको यो बिध्न विरोध गर्ने तपाईंको पार्टीको प्रवासी संघ भारतीय एकता समाज पनि भारतमै सक्रिय रहन कसरी सम्भव भयो?
अन्य केही देशजस्तै भारतमा पनि ‘डेमोक्रेटिक सिस्टम’ छ। माक्र्सवादको आविष्कारक कार्ल माक्र्सले आफ्नो सिद्धान्तको प्रतिपादन बेलायतमा बसेर गरेका थिए। किनकी बेलायतमा डेमोक्रेटिक सिस्टम थियो। अहिले पनि विश्वका क्रान्तिकारी नेताहरु यूरोपका विभिन्न देशमा गएर बसिरहेका छन्। फिलिपिन्समा सशस्त्र संघर्ष गर्ने गुरिल्ला नेताहरु यूरोपमा बसिरहेका छन्। उनीहरु त्यहाँ किन बसिरहेका छन् भने त्यहाँको कानुनले उनीहरुको रक्षा गरिदिएको छ। डेमोक्रेसी भएका देशमा सरकारले केही गर्न खोजेमा अदालतले रोक्छ। मानव अधिकारवादीहरुले विरोध गर्छन्। यो सिस्टमको फइदा यहि हो। हामीले पनि त्यसैको उपयोग गरेका हौं।
पछिल्लो समय नेपाल नीतिमा दिल्ली आफैं संकटमा परेजस्तो देखिन्छ नि, तपाईंलाई के लाग्छ?
नेपालको सन्दर्भमा भारत बारम्बार हार्दै आएको छ। भारतबाट संविधान निर्माणमा बाधा हाल्ने काम भएको थियो तर संविधान जारी भयो। कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर संविधान निर्माण गर्न लागेका बेला भारतले विभिन्न माध्यमबाट त्यसलाई रोक्न कोशिस ग‍रेकै हो। तर सफल हुन सकेन। निर्वाचनमा भारतले काँग्रेस र मधेशवादी दलहरुलाई जिताउने प्रयास गरेपनि वामगठबन्धनको जित भयो। त्यो पनि भारतको हार हो। नाकाबन्दीमा पनि भारतको ठूलो हार भयो, किनकी त्यसले नेपालीहरुको भारतप्रतिको समर्थन गुम्यो।
उसोभए नेपालमा चीनको प्रभाव बलियो हुँदै गएको हो त?
चीन पूँजीवादको बाटोमा गएको छ, त्यसको हामी विरोध गर्छौं। नेपालको सन्दर्भमा चीनको भूमिकाको चाहिं हामी समर्थन गर्छौं। यहाँको विकासका लागि चीनको भूमिका हुनुपर्छ। भारतले नेपाललाई जहिले पनि गिद्दे नजरले हेरेको छ तर चीनले कहिल्यै त्यस्तो गरेको छैन। नेपाल अहिलेसम्म बचेको भूराजनीतिक कारणले पनि हो। किनकी चीनको डरले भारतले नेपालमाथि तुरुन्तै आक्रमण गर्न सक्दैन। भारतले आक्रमण ग‍र्यो भने आफ्नो देशको सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि चीन चुप लागेर बस्न सक्दैन। चीनले नेपालका विभिन्न नाका खोलेर हामीलाई सहयोग गरेको छ। त्यसमा हामीले समर्थन गरेका छौं। देशको सुरक्षाको हिसाबले पनि नेपालले चीनसँग सम्बन्ध जोड्नुपर्छ।
सुरुमा संघीयताको खुलेर विरोध गर्नुभयो तर अहिले संघीयताको फाइदा उठाइरहनु भएको छ, होइन?
संघीयताको पहिले पनि विरोध थियो र अहिले पनि विरोध छ। संघीयता अहिले पनि पुरै लागु हुने प्रकृयामा गएको छैन। नेपाल सरकारका लागि अहिले झन् संघीयता झमेलाको रुपमा देखिएको छ। नेपाल जस्तो पिछडिएको र आर्थिक रुपले कमजोर देशका लागि संघीयता उपयुक्त छैन। यसलाई नेपालले धान्नै गाह्रो छ।
नेपालका लागि यो व्यवहारिक कुरा होइन। संविधान निर्माणका बेला संघीयताप्रति हामीले शंका र विरोध गरेका गरेका थियौं। स्थानीय निर्वाचनदेखि विभिन्न निर्वाचनमा हामीले संघीयताको विरोध गरेका छौं। संसदमा जाने हाम्रा प्रतिनिधिहरुले भोलिपनि संघियताको विरोध गरिरहन्छन्।
संघीयताको विरोध गर्नुको कारण खर्चिलो हुन्छ भनेर हो कि अन्य केही छ?
खर्चिलो त एउटा पाटो मात्र हो। गम्भिर कारण अर्के छ। कांग्रेस, कम्युनिष्ट कसैलेपनि माग गरेर नेपालमा संघीयता आएको होइन। संघीयता त भारतको योजना हो। संघीयताको कुरा भारतले मधेशवादी दलहरु मार्फत उठाएको हो। संघीयताबाट केन्द्रलाई कमजोर पार्ने र तराईका राज्यहरु नेपालबाट अलग गरेपछि नेपालमा नाकाबन्दी गर्न सजिलो हुने भयो। संघीयता नेपाललाई भारतमा मिलाउने योजना अन्र्तगत आएको हो। त्यसैले हामीले यसको विरोध गरेका हौं। मूल रुपमा यसको उदेश्य नेपाललाई टुक्रयाउने नै हो।
प्रकाशित ६ माघ २०७४, शनिबार | 2018-01-20 21:41:42
‘नेपालले राजा महेन्द्रको पालादेखि नै भारत र चीनलाई सन्तुलन गरेको गर्‍यै गरेर अहिलेसम्म आएको छ। श्रीलंका, बंगलादेश र माल्दिभ्सले भारत र चीनबीच कसरी...
‘अहिले जुन परराष्ट्रनीति सञ्चालन भइराखेको छ, त्यसप्रति दुबै छिमेकी सशंकित छन्। यो प्रबृति बढ्दै गयो भने उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा...
‘हामी एसर्टिभ भएकाले वासिङ्टन डिसी बोलाइएको होइन, उनीहरु एसर्टिभ भएर बोलाइएको हो। वासिङ्टन जानुअघि थाहा पाउनु पर्‍यो– हामीलाई किन बोलाइएको हो?...
अब सचिवालयले बैठक बोलाएन भने स्थायी कमिटीका सदस्यहरु एक ठाउँमा जुटेर सचिवालयलाई कसरी ठीक ठाउँमा ल्याउने भनेर छलफल सुरु गर्ने हो। त्यसपछि के गर्ने...